(1) vetikal ịghasa ebu
The n'usoro ọsọ nke ịghasa nke vetikal ịghasa ebu ka dị elu karịa nke ndị nkịtị ịghasa ebu. N'okpuru ihe nke centrifugal agha, esemokwu na-eme n'etiti ihe onwunwe na nnukwu ogige ahụ. Nke a esemokwu na-egbochi ihe si n'usoro ọnụ na gburugburu agụba ma merie ịdị mkpa nke ihe da, si otú ifiọkde vetikal erute nke material.This igwe conveyance ibu na-obere, conveyance elu na-obere, n'usoro ọsọ dị elu, oriri ike bụ big.It bụ karịsịa kwesịrị ekwesị n'ihi na erute powdery na granular ihe ezi fluidity, nke na-bụ-eji maka eweli ihe. The na-ebuli elu bụ n'ozuzu ọ dịghị ihe karịrị 8 mita.
(2) kwụ ịghasa ebu
Mgbe ihe onwunwe n'ime ofu ke oghere igwe, n'ihi na ike ndọda nke ihe onwunwe na ihe ndị na esemokwu n'etiti oghere igwe, ihe onwunwe na-amụbawanye na ala na igwe anaghị bugharia na helix, na na na a n'usoro n'usoro helical vane chụpụrụ -ịga n'ihu, ka bụghị n'usoro aku tinyere adiana nke ịghasa maka translational ngagharị, iji nweta nzube nke erute material.The ígwè bụ adaba n'ihi na multi-ebe loading na ebutu, na ike ga-agwakọta, kpaliri ma ọ bụ mma n'out oge n'oge erute. Chebaara bufee, mfe ikwunye; The ihe onwunwe ndinuak ọnwụ, na Ọdịdị nke kwụ ịghasa ebu dị mfe, mfe iji wụnye, ịnọgide na-enwe na troubleshoot.
Adabara kwụ ma ọ bụ ubé mmasị na-aga n'ihu edo erute rụrụ ihe onwunwe, na-arụ ọrụ na gburugburu ebe obibi okpomọkụ bụ -20 ~ 40 ℃, okpomọkụ maka erute onwunwe - 20 ~ 80 ℃ .its n'usoro ọsọ na-dịtụ ala tụnyere vetikal ebu, tumadi na-eji maka kwụ ma ọ bụ obere nchepụta nyefe maka ihe, na iga anya bụ n'ozuzu adịghị aka 70 mita.
(3) achọ anwụrụ (ala ebu) ebu
The gburugburu tube ebu bụ a na-aga n'ihu gburugburu agụba welded n'ime cylindrical shei, ndị cylindrical shei agbagharị na gburugburu agụba ọnụ. N'ihi na centrifugal ike na esemokwu, kwukwara ihe na-agbagharị na ụlọ na ebuliwo, ihe n'okpuru ihe nke ike ndọda na slide tinyere gburugburu elu, na-eme ka ihe onwunwe na gburugburu anwụrụ adiana ka na-aghọta ihe ịga n'ihu, ka bụghị n'usoro tinyere adiana nke ịghasa nut maka translational ngagharị, iji nweta nzube nke erute ihe onwunwe.
Low oriri ike na ala mmezi-eri; Mgbe na-eri nri ya, ọ nwere ike imeghari ka chọrọ nke mkpumkpu nri, na ike mezue dị iche iche na nkà na ụzụ chọrọ dị ka erute, na-akpali na agwakọta n'otu time.It na-adaba adaba iji mara ma butuo multi-uche, na ike igosi ihe na elu okpomọkụ. Adabara kwụ erute nke elu okpomọkụ ihe; Ọ nwere ezi ime mgbanwe iji kwekọọ ihe na-elu okpomọkụ, mkpumkpu ihe ọkọnọ, mgbochi ngwepịa na mgbochi mgbaru ikuku ndu chọrọ, nakwa dị ka usoro nke chọrọ multi-ebe loading na ebutu. Practice egosila na ọ bụ irè na ụgbọ njem cement clinker, akọrọ na nkume nzu, phosphate ore, ilmenite ntụ ntụ, coal na slag.
Urughuru size nke ihe onwunwe kwukwara na njedebe uzo mmiri agaghi-adị ukwuu karịa 1/4 dayameta nke ịghasa. Urughuru size nke ihe si n'etiti oriri uzo mmiri agaghi-adị ukwuu karịa 30mm. Iji hụ na cylinder adịghị amị deformation, odori okpomọkụ ga-achịkwa n'okpuru 300 ℃. The abrasion nke agụba na trough dị nnọọ oké njọ mgbe erute ngwaọrụ.
(4) mgbanwe ịghasa ebu
The ịghasa mandrel nke a igwe bụ mgbanwe, otú ahụ erute akara pụrụ ime ndokwa dị ka ohere usoro. Dị ka ogologo nkezi nke kwụ na vetikal (nnukwu itinye) ngalaba na layout akara, ya arụ ọrụ ụkpụrụ e mere dị ka nkịtị ịghasa ebu ma ọ bụ vetikal ịghasa ebu.
Maka nnyefe akara kwesịrị ka a edoghi any ndokwa dị ka ohere usoro iji zere ọnọdụ nke ihe onwunwe nyefe; Mgbe ọtụtụ ihe ma ọ bụ ike ihe ndị a na-etinye n'ime igwe shei, na gburugburu ga-ise n'elu kpam kpam na-enweghị blocking.The mkpọtụ bụ small.It na-bụ-eji maka kwụ na vetikal erute nke ihe n'otu oge. The ọsọ nke adiana na-adịkarị chọrọ ka elu karịa 1000r / min na vetikal nnyefe.